ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा आर्मी र फ्रेन्ड्स बराबरीमा रोकिए, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा आर्मी र फ्रेन्ड्स बराबरीमा रोकिए
काठमाडौँ । पल्सर सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा उपाधि दाबेदार क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लबले एनआईबीएल फ्रेन्ड्स क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाडेका छन्। एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा फ्रेन्ड्सविरुद्ध एकतर्फी खेल खेलेपनि गोल गर्न नसक्दा आर्मीले बराबरी खेलेको हो । कमजोर टिम फ्रेन्ड्सविरुद्ध कप्तान भरत खवास, जर्ज प्रिन्स कार्की बिना मैदान उत्रिएको आर्मीले गोल गर्न सकेनन्।
भरत दुई पहेलो कार्डको कारण एक खेलको प्रतिबन्धमा रहेका थिए। जर्ज प्रिन्स आर्मी ट्रेनिङका लागि टिममा रहेका छैनन्। खेलमा आर्मीले पटक पटक गोलको प्रयास गरेको थियो। तर, आर्मीका आधा दर्जन बढी प्रहार फ्रेन्ड्सका गोलकिपर देव लिम्बुले विफल बनाईदिएका थिए।
खेलमा फ्रेन्ड्सका देव लिम्बु म्यान अफ दि म्याच घोषित भए। यो बराबरीसंगै आर्मीले दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ । तेस्रो स्थानको आर्मीले ६ खेलबाट १४ अंक जोडेको छ। ५ अंक जोडेको फ्रेन्ड्स दशौं स्थानमा छ।
यस्तै आज भएको अर्को खेलमा ब्रिगेड ब्वाईज क्लब र मछिन्द्र क्लबले पनि बराबरी खेल्दै अंक बाडेका छन् । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा बिहिबार भएको दोस्रो खेलमा ब्रिगेड र मछिन्द्रले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाडेका हुन्।
खेलमा दुवै टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेनन् । यस्तै पाएको अवसरमा गोल गर्न नसक्दा दुवैले बराबरी खेलको हो। बराबरीसंगै ब्रिगेडले ६ खेलबाट ४ अंक जोडेको छ। ब्रिगेड लिगको १२ औं स्थानमा छ। मछिन्द्रले ६ खेलबाट ३ अंक जोडेको छ । मछिन्द्र १३ औं स्थानमा छ।